November 8, 2017 – Allpuntlander.com
War dag dag ah Daawo Sawiro Laga soo Qaaday Dhawacyada Ciidamada Somaliland Dgaaal Wali ka socda Maanta Tukaraq
DAGAALKA TUKARAQ OO XOOGAYSTAY IYO GUUTO KA MIDA BEELAHA DAGA GOBALKA SOOL OO LA SOCDAY CIIDANKA SOMALILAND OO DAGAALKA ISAGA BAXAY
War Deg Deg ah Dowlada Puntland oo Dagaalkii Tukaraq ee Maanta ku Qabsatay Gadiidka Dagalka akhriso tirada gadiidka somaliland laga qabsaday
(Faahfaahin): Pakistan Iyo Somalia Oo Kala Saxiixday Heshiis Lagu Horumarinayo Nidaamka Waraaqaha Aqoonsiga Ee Somalia
Maraykanka Oo Lagu Cadaadinayo Inuu Buuraha Golan U Aqoonsado Qeyb Ka Mid Ah Dhulka Yuhuudda.
Qoral Xiiso badan Xusuusta boqorkii ugu dambeeyay ee saldanaddii Mughal
November 8, 2017 admin1
Wax ka baddan muddo qarni ah waxaa la’iska hilmaamay taariikhda iyo xusuustii boqorkii ugu dambeeyay ee saldanadii xoogga badnayd ee Mughal taas oo ka talin jirtay dalalka Hindiya, Pakistan, Bangladesh, iyo Afghanistan. Isaga oo jeebeysan, xanuunsan ayuu ku dhintay magaalada Yangon ee dalka Myamar, halkaas oo gumeystihii Ingiriiska ay geeyeen isaga oo maxbuus ah. Waxa ay ahayd sanadkii 1862-dii wax yar uun kadib markii Ingiriisku uu jabiyay ciidankiisii. Bahadur Zafar II ayaa waxaa lagu aasay meel u dhow goobta caanka ah ee lagu magacaabo Shwedagon Pagoda ee magaalada Yangon si…
Wararka Maanta, Wararka Puntland, WaraysiyoLeave a comment
AKHRISO: Amiirada iyo Maalqabeennada lagu xiray Sacuudiga (Shaxda Lacagaha ay heystaan)
lolaha musuqmaasuq la dirirka ee ka socda Boqortooyada Sacuudiga ayaa keenay in xabsiga la dhigo Amiiro, wasiiro hore iyo maalqabeenadii ugu waaweynaa dalkaasi. Xubnaha xabsiga la dhigay ayaa lacagta ay leeyihiin marka la isku daro lagu qiyaasay inay ka badan tahay 100 Billion, waxaana ololahan lagu sheegay in ujeedkiisu yahay sidii uu awoodda oo dhan gacanta ugu dhigi lahaa. HOOS KA AKHRISO SHAXDA AMIIRADA LA XIRAY IYO LACAGAHA AY HEYSTAAN Shire Garee Wararkeena
Dalka Ingariiska Wasiirad lagu heesto Kulan Qarsoodi ah oo la yeelatay Israel..
Xoghayaha Horumarinta Caalamiga ee dalka UK Ms.Priti Patel ayaa laga cabsi qabaa inay xilkeeda ku weyso kulamo qarsood ah oo ay la yeelatay Madaxda Israel, haweenaydan ayaa kamid ah xubnaha xiriirka dhow laleh maamulka Yahuuda. Wasiirada ayaa ka qarisay dowlada iyo Wasaarada Arrimaha Dibada kulamo ay si shaqsi ah ulla yeelatay Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu xili ay fasax ku joogtay Israel, waxay sidoo kale qarisay kulamo kale oo ay la yeelatay saraakiil ka socda maamulka Israel kulamadaasi oo dhacay bilihii Agoosto iyo September. Kulamadan ayaa ah sharci daro ka horimaaneysa…
XOG: Sirdoonka DF oo qorshe cusub ay kaga hortagayaan u degay dilalka qorsheysan ee Muqdisho ka geystaan Daacish